बच्चाहरु को लागि बुनाई - एउटा सानो चमत्कार को जन्म लागि प्रतीक्षा जवान आमा उठयो सक्दैन एउटा पेशा। बच्चालाई जन्म हुँदा एक नियम, रूप, त्यो बुनाई गर्न पक्कै छ भनेर उसलाई आफ्नो भनेर धेरै ध्यान माग। तर पर्खने को नौ महिना - समय पर्याप्त अवधि, भविष्यमा बच्चा हेरचाह गर्न उसलाई वा crocheted मूल सानो कुरा बाइन्डगर्नसकेन।
तथापि, बच्चाहरु को लागि बुनाई अप एक वर्ष वा crocheted भने - एक प्रक्रिया आफ्नो जन्म precedes कि, त्यसपछि सम्भव आफ्नै कुरा आफ्नो जीवन भर द्वारा सम्बन्धित मित्र तथा आफन्तहरूले आफ्नो हेरचाह व्यक्त। तिनीहरूले धेरै कृतज्ञ हुनेछ, मलाई विश्वास गर्छन्।
बच्चाहरु को लागि बुनाई हुक प्रयोग समान शिल्प भन्दा केहि बढी जटिल हुन मानिन्छ। कि बनाउन बच्चाहरु र बच्चाहरुका लागि सानो कुरा सानो विवरण हुक बनाउन सजिलो साँच्चै छ। र प्रशस्त मात्रामा धनुष, flounces र ruches सबै प्रकारका धेरै needlewomen लागि एक भन्दा दुई "लाठी" लिङ्क गर्न धेरै गाह्रो रूपमा, लुगा सजाउनु। अर्कोतर्फ, बच्चाहरु बुनाई लागि बुनाई crochet गर्न वस्तुतः असम्भव छ भनी विभिन्न रंग या प्रिंट विभिन्न अनुप्रयोगहरूको प्रयोग समावेश छ। सामान्य मा, साधन को विकल्प मास्टर को बानी र प्राथमिकताहरू मा, तर पनि आफ्नो काम को एक परिणाम रूपमा प्रकाश हेर्नुपर्छ कि उत्पादन को प्रकार मा मात्र होइन निर्भर गर्दछ।
एकै समयमा, नियम, धेरै महिला बच्चाहरु को लागि, बुनाई प्रयोग गर्नुहुने तिनीहरूलाई जाडो लुगा बनाउने: न्यानो जैकेट र प्यान्ट, overalls, लिफाफें र, पाठ्यक्रम, टोपी, मोजा र Mittens को। कपडे, sundresses, टोपी र टी-शर्ट, ब्लाउज र boleros, स्कर्ट र Swimwear: तर हुक प्रयोग गरेर तपाईं बस अचम्मको कुराहरू गर्मी सिजन लागि बच्चाहरु को लागि, विशेष गरी बालिका लागि लिङ्क गर्न सक्नुहुन्छ।
बुनना सिक्न र crochet एकदम सरल छ। तर हरेक महिला बुनाइ यस प्रकारको सफल गर्न सक्षम हुनेछ। तर किन मात्र महिला? केही मानिसहरू पनि खुसीसाथ यो शौक दिइएको। तर, हामी धेरै दुर्लभ छ, स्वीकार गर्नुपर्छ। एक विशेष क्रममा प्रयोगको कम दायाँ र गलत, शिल्प को सम्पूर्ण प्रक्रिया, बुनाई सुई, - बुनाई लूपहरूको मात्र दुई प्रकार को सरल चाल महारत भएको।
लामो crochet - यो नमुना provyazyvayutsya कि स्तम्भहरू संग improvisation छ। त्यो वास्तवमा, धेरै सरल, बुनाइ यस प्रकारको छ, बुनना सक्छन् बिल्कुल सबैलाई सिक्न। यो एक व्यक्तिको मनपर्ने शौक लागि हुन्छ भनेर तर हात अलि प्राप्त। बुनाई लगनशील भई लागिरहेमा, धैर्य र कल्पना धेरै आवश्यक छ। त्यसपछि मात्र spokes वा हुक मालिकको बाहिर साँच्चै सुन्दर र आवश्यक कुराहरू देखिन्छन्।
बच्चाहरु र वयस्क जो एक ठूलो रकम हो, विशेष पत्रिका र पुस्तकहरू सहयोग गर्न को लागि बुनाई र crochet प्रेम। यी स्रोतहरू त्यहाँ मात्र तपाईंले ती वा अन्य कुराहरू सिर्जना मार्फत, तर पनि केही रोचक विचार, तपाईंले आफ्नो बच्चा एक विशेष फेसनदार दराज दिन सक्छ कि साकार मार्गदर्शन हुनेछ।
कसरी न्यानो र सुन्दर लुगा मा ह्यान्डल लुगा लगाउनु गर्न, mitten सुई बुनना गर्न
पोंछे को रसीला ल्वाड़: सुक्यो र झट्टै मरिहाल्यो गर्दैन एक फूल
पाठो हुक: योजना र विवरण। एक भेडा हुक कसरी बाँध गर्न?
साटन रिबन को गुलाब - extravagant पूरक घर सजावट
छाला दोष - उपकला coccygeal पाठ्यक्रम।
क्रिमीआ रिजर्व: सूची, तस्बिर
मोल्दोभियन सोवियत समाजवादी गणतन्त्र: सृष्टि र विकासको इतिहास
भाषण को चित्रा के हुन्
Fereniki छुट्टी Resort 3: * फोटो, मूल्यहरु र समीक्षा
सिमसार क्षेत्र: एक लामो इतिहास संग मास्को को आकर्षण
"Shishiga" - एक सामान उचाल्ने यंत्र एक जनावर र RV छ
एक एसयूवी लागि सबै भन्दा राम्रो तान्नु डोरी: मोडेल, सुविधा र समीक्षा समीक्षा
Pits - यो के हो? उपकरण pits